Wararka Maanta: Jimco, Jun 8 , 2012-Saraakiisha Ciidamada AMISOM oo sheegtay inay dullaan ku yihiin Gobollada Bay iyo Shabeellada Dhexe
Sarkaalkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qorshahooda koowaad uu ku wajahan yahay degmooyin ka tirsan gobolka Bay, markaas kaddibna ay u dhaqaaqi doonaan dhinaca gobolka Shabeellada dhexe, gaar ahaan degmada Balcad.
"Qorshaheenna koowaad waa inaan ciidammo geyno Baydhabo, markaas kaddibna waxaan u dhaqaaqi doonaa dhinaca degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe," ayuu yiri Jen. Kiki oo sheegay in howgalladoodu aysan joogsan doonin inta ay dalka oo dhan ka saarayaan Al-shabaab.
Jen. Kiki, wuxuu sheegay in degmada Afgooye oo toddobaadyo ka hor ay ka qabsadeen Al-shabaab ay xaaladeedu wanaagsan tahay, balse ay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye ay ka jiraan xaalado ammmaan-darro uuna u baahan yahay sifeyn.
Degmada Afgooye oo 30-km u jirta Muqdisho ayaa waxaa ka dhaca mararka qaar iska-horimaadyo u dhexeeya ciidanka DKMG ah gaar ahaan booliiska iyo milateriga kuwaasoo ay ka dhashaan khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sidoo kalena dadka degmadaas ku nool ayaa waxay ka cabanayaan falal ammaan-darro oo ay kula kacaan ciidamada dowladda, iyadoo saraakiisha dowladduna ay sheegeen inay ciqaabi doonaan askarigii lagu qabto isagoo dadka shacabka ah dhibaateynaya.